कांग्रेसमा कोइराला परिवार पनि मेरो साथमा छन्, त्यसैले बिराटनगरमा मेयर जित्छु ! | suryakhabar.com
Home कुराकानी कांग्रेसमा कोइराला परिवार पनि मेरो साथमा छन्, त्यसैले बिराटनगरमा मेयर जित्छु !
मुलुकको दास्रो ठूलो शहरको रुपमा चिनिने बिराटनगर पछिल्लो समयमा किन पछाडी पर्यो, भरतपुर, पोखरा र ललितपुर महानगरपालिका हुंदा बिराटनगर किन बन्न सकेन । केहि दिन अगाडीमात्र सरकारले माहानगरपालिका बनाएपनि किन सर्बोच्च अदालतको कार्यान्वय नगर्न आदेश दिएपछि बिराटनगर लगायतका अन्य नगरपालिका र थपिएका गाँउपलिकाहरु जहाँको तंहि भए, केहिलाई स्तरोन्नती गरिएको थियो भने केहि तहहरु थपिएका थिए । यसैबिच असार ९ गते आउदै गरेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्बाचन र बिराटनगरको भबिश्यसंग जोडिएको मेयरको बिषयमा नेपाली काँग्रेसको १३ अाैं महाधिवेशनमा महिलातर्फबाट ६ जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी हुनुभएकी शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा परिचित काँग्रेसको राजनीतिमा सकृय महिला उमेर्द्वार डा. डिला संग्राैंलासंगको सुर्यखबर प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :-
तपाई महिला संघको अध्यक्ष भैसकेको मान्छे, कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय निर्वाचनमा उठ्न लाग्नुभयो नि किन ?
–म महिला संघको तदर्थ समितिको राष्ट्रिय अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हो । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेपनि म यसबेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाट मेयरमा उम्मेद्वारी दिने तयारीमा छु । किनभने हामी अब देशभर स्थानीय निर्वाचन पश्चात स्थानीय सरकार चलाउने तयारीमा छौ । जतिपनि विकासका मुद्धा र पूर्वाधारहरु रहेका छन्, ती सबै स्थानीय सरकारमार्फत जनतामा लैजादैछौ । मेरो उम्मेद्वारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने म जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा र समृद्धिको पक्षमा केन्द्रीत रहँदै स्थानीय चुनावमा लड्ने तयारीमा छु । विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई स्वच्छ, हराभरा र मेट्रो सिटीको रुपमा विकास गर्न मैले विराटनगरबाट स्थानीय चुनाव लड्ने निर्णय गरेकी हुँ ।
स्थानीय चुनावमा त स्थानीय नेताहरुलाई अवसर दिनुपर्ने होइन र ?
–तपाईले सोधेको उत्तर सही हो तर म पनि यहीको स्थानीय बासिन्दा हुँ, स्थानीय नेता पनि हुँ । ०४६ सालको परिवर्तन लगत्तै म विराटनगरमा वाड १५ को महिला सङंकाे अध्यक्ष र बुथको सभापति बनेको थिए । त्यसपछि म नगरको पार्टी सदस्य बने । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको जिल्ला उपसभापति भए र अहिले म नवौ माहाधिवेसनबाट पार्टीको महासमिति सदस्यको रुपमा काम गरिरहेको छु । स्थानीय तहमा जनताको मन जितेर केन्द्रीय सदस्य हुने पहिलो महिला नेतानै पार्टीभित्र म हुँ । विडम्बना के छ भने अघिल्ला संविधानसभा दुइवटै निर्वाचनमा समानूपातिकको उम्मेद्वारी पाएपनि संविधान लेख्ने मौका पाइन । त्यसैले गर्दा जनताप्रतिको काम गर्ने चाहना, जिज्ञासा र नेपाली जनताको सपनालाई साकार पार्न म यो ठाउँमा उभिन चाहान्छु । स्थानीय चुनावमा कांग्रेसको तहबाट हेर्दा सम्पूर्ण महिलालाई शसक्तिकरणको बाटो र विकासका लागि सवलीकरणको बाटोमा लैजान आवश्यक देखिन्छ । त्यसकारणले पनि मैले मेयरमा उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेको हुँ । बिराटनगरमा ३५ बर्षको जिबन बिताईसकेको छु, १७ बर्ष प्राध्यापन पेशामा लागेको महिला हुं, बिराटनगरमा शैक्षिक, सामाजीक र राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरेको छु, मैले महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, स्नातकोत्तर क्याम्पस, कन्या क्याम्पस लगायतमा पढाएकी छु, त्यो बिराटनगरबासीलाई सबै थाहा छ, महिलासंघको निर्बाचन गराउन जिम्मेवारी पाएपछि काठमाण्डौलाईमात्र होईन देशलाई नै बुझ्ने मौका पाए, मेरोलागी गौरवको कुरा हो, महिलाहरुका समस्या समाधान गर्ने मौका पाएं, अधिवेशन सम्पन्न गरि पुनः बिराटनगर फर्किएको छु । म बिराटनगरको सबै समस्यालाई पहिचान गरेकी र समाधान गर्नसक्ने महिला हुं । मेरो बिद्याबारिधी पनि बिराटनगरको वैष्णव धर्म र सम्प्रदायको बारेमा हो । प्रध्यापनमा हुंदा प्राध्यापकसंघमा समेत काम गरेकी थिएं । काँग्रेस राजनीतिमा नेपाल बिद्यार्थि संघदेखि नै सकृय भएको हुं । म बिराटनगरको स्थानीय नै हुं ।
–तपाई सभापति देउवाको समुहबाट उम्मेद्वारी दिँदै हुनुहुन्छ, हैन ?
म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हु, म गुटको आधारबाट अभिप्ररित भएर टिकट दिनुपर्छ भन्ने मान्याता म राख्दिन । टिकट दिदा योग्यता, क्षमता, पार्टीभित्रको लगानी, कृयाशीलता, जनताप्रतिको दायीत्व, भाबनालाई मूल्याँकन गरि टिकट दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म बिश्वास गर्छु । । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसलाई अहिले पनि हामी सोही हाराहारीको पार्टी बनाउन चाहान्छौ । यो कामको लागि गुटले काम गर्दैन । त्यसैले म विराटनगरमा उम्मेद्वारी दिने तयारी गरिरहँदा के भन्न चाहान्छु भने गुटबन्दीको रुपमा मैले प्रतिनिधित्व गरेको होइन, समग्र कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिने हो । मेरो लागि सिंगो कांग्रेसनै सबैथोक हो । म पार्टीभित्र गुटभन्दा माथि उठ्न चाहान्छु । म राष्ट्रनायक स्व.गरिजाप्रसाद कोईरालासंग प्रभाबित भएर काँग्रेसमा कृयाशिल भएकी हुं । लामो समयसम्म नोना कोईराला, शैलाजा आचार्य, नजिक भएर काम गरेकी थिएं, पार्टीका आदरणीय केन्द्रीय सदस्यहरु महेश आचार्य, डा.शेखर कोईराला, गुरुराज घिमिरे, डा. मीनेन्द्र रिजाल ज्यूहरुसंग पनि सल्लाह भईरहेको छ । मलाई बिराटनगरको हित चाहने काँग्रेसका ब्यक्तीत्वहरुको साथ हुन्छ भन्ने लाग्छ । ०६४ सालको संबिधानसभा निर्बाचनमा समानुपातीकमा सांसदमा सिफारिस हुंदा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको उपप्राध्यापकको जागीरबाट राजीनामा दिएं, सांसद पनि भईन, चित्त बुझाएर राजनीतिमा सकृय छु । ०७० सुालमा पनि सांसद भईन अब बिराटनगरका जनताको सेवामा हाजिर हुन लागपरिरहेकी छु , आशा छ म यो पटक मेरो उद्येश्यमा सफल हुंन्छु ।
–काठमाण्डौमा बसी जीवन विताउने डा.डिला संग्रौला, कसरी विराटनगरसँग सन्तुलन कायम गर्न सक्नुहुन्छ त ?
– यो बारेमा मैले धेरै कुरा अघि पनि राखिसके । मलाई पार्टीले महिलाहरुको तदर्थ समितिको नेतृत्व दियो । धेरै वर्षदेखि मेरो राजनीतिक इतिहास मोरङ र विराटनगरसँग जोडिएर आएको छ । सुरुदेखिनै मैले महिला संघ र पार्टीका गाउँ इकाईदेखि माथिसम्म काम गर्दै आए । पार्टी र महिला संघलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म ल्याउन जसरी भूमिका खेले त्यसरी नै मैले यो सन्तुलनलाई कायम गर्न सक्छु । जसरी मेरो इतिहास विराटनगरदेखि काठमाण्डौसम्म जोडिएको छ ।
–कांग्रेसको राजनीतिक इतिहासमा कोइराला परिवारको प्रमुख स्थानको रुपमा रहेको ऐतिहासिक नगरी विराटनगरमा देउवा समुहलाई टिकट देला त पार्टीले ?
– लामो समयसम्म मैले कोइराला परिवारसँग काम गरेकी छु । उहाँहरुसँग समेत मेरो राम्रो सम्बन्ध छ । मैले अघि भनेजस्तै म गुटको पक्षमा छैन । त्यसैले यो फलाना परिवारको भूमि भनेर भन्न मिल्दैन । विराटनगरबाट हामी पार्टीभित्र ५ जना केन्द्रीय सदस्य छौ । सबैले मेरो उम्मेद्वारी र पहलकद्मीलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् र यहाँभन्दा अघि पनि सकारात्मक रुपमा लिनुहुन्थ्यो । टिकट वितरणको संयन्त्रमा म आफै पनि छु । त्यसैले मलाई असर पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
–चुनावमार्फत विराटनगरवासीका लागि कस्तो खालको नारा लिएर मैदानमा जाँदै हुनुहुन्छ ?
–विराटनगरको ठूलो र बृहत इतिहास छ । यसको संरक्षण गर्दै विकास गर्नु हाम्रो कर्तव्य समेत हो । विराटनगरमा विकासका पूर्वाधारहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतको विकास गरेका अघि जानु मेरो पहिलो काम हुनेछ । त्योसँगै विराटनगरलाई सुन्दरतासँग जोडेर यसको विकास गर्न जरुरी छ । यसको व्यवस्थापन गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । विराटनगरको अर्को विशेषता भनेको यसको ऐतिहासिकता हो । यहाँको संस्कृति र इतिहासको संरक्षण गरिनुपर्छ । यहाँका सम्पदाहरुको जगेर्ना गर्नुपर्छ । अर्को कुरा यो नगरलाई इतिहासदेखिनै औधोगिक नगरीको रुपमा चिनिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनीतिक क्रान्तिको सरुवात गर्दा यहीको जुटमिलबाट सुरु गर्नुभएको थियो । त्यस्ता उद्योगहरु अहिले पनि छन् तर जिर्ण छन्, ती उद्योगहरुको जगेर्ना गर्दै नयाँ उद्योगहरुको मूल फुटाउन हामी चाहान्छौ । त्यस्तै विराटनगरसँग जोगवनी नाका जोडिएको छ । जोगवनीसम्म भारतले रेल ल्याईपुर्याएको छ । जोगवनी, विराटनगर हुँदै काठमाण्डौसम्म त्यो रेल पुर्याउन सके मुलुकको कायापलट हुने निश्चित छ । त्यसैले यसको लागि हाम्रो पहल हुनेछ । यहाँको अस्पतालाई क्षेत्रीय अस्पताल बनाउने, १ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने लगायतका महत्वपूर्ण र जनप्रिय नाराहरु हामीसँग छन् । यसमा राजनीतिक विचारधारा भन्दा पनि हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने सामाजिक नारा दिनु अहिलेको आवश्यकता ठानेका छौं, किनभने विराटनगर हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रका मानिसहरु बसोबास गर्ने स्थान हो । त्यस्तै, समग्र महिलाहरुलाई मूल प्रवाहमा समावेश गराउने नारालाई पनि मैले विशेष प्राथमिकता दिएकी छु । यहांका सबै समस्याहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र ढल लगायतका बिकासमा अगाडी बढ्छु ।
–स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु भनेको जनता र विकासले जित्नु हो । सबै जनतालाई जोड्ने यो अभियानमा कांग्रेसको ठूलो भूमिका छ । कांग्रेसले हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्न सक्छ । त्यसैले यो मुलुकमा कांग्रेसको विकल्प छैन । विराटनगरको राजनीतिक इतिहास र क्रान्तिको प्रवाहलाई सम्झेर पनि हामीलाई जनताले साथ दिनेछन् । सबै विराटनगरवासी र नेपाली जनतालाई कांग्रेसलाई जिताउन आग्रह गर्छु । मेरो यही आग्रह छ ।
Tags: कांग्रेसमा कोइराला परिवार पनि मेरो साथमा छन्त्यसैले बिराटनगर मेयर जित्छु !
यसरी छानिदैछन् काँग्रेसबाट ऐतिहासिक नगरी बिराटनगर महानगरपालिकाको मेयर
१६ जेष्ठ २०७४, मंगलवार १०:१७